टेस्ला रोडस्टरको दोस्रो पुस्ता, ० सेकेन्ड १० सेकेन्ड भन्दा कममा | ग्याजेट समाचार
एलोन मस्कको कम्पनीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमको टेस्ला इलेक्ट्रिक ट्रक रातको केवल मुख्य पात्र मात्र थिएन - स्पेनमा बिहान सबेरै। तर को विवरण पछि टेस्ला सेमी, कस्तुरीको आफ्नो आस्तीन मा एक आश्चर्य थियो। बहुमुखी व्यापारीले नयाँ गाडीको लागि मार्ग दिए। र यसले दर्शकहरूलाई सम्झायो कि टेस्लाले २०० journey मा रोडस्टरको साथ आफ्नो यात्रा शुरू गर्‍यो (२०११ मा मोडेल बन्द गरियो)। र अब यो आफ्नो मूल मा फर्कने समय थियो। एलोन मस्कले यसै तरीकाले मार्ग दियो दोस्रो पुस्ता टेस्ला रोडस्टर.
यो दोस्रो जेनरेशन टेस्ला रोडस्टरमा छ इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बजारमा योगदान दिन रोचक आंकडा। तर सबै भन्दा माथि, यसको त्वरण छ कि यसले जनताको ध्यान आकर्षण गरेको छ: यसले ० सेकेन्ड १० सेकेन्ड भन्दा कममा प्राप्त गर्न सक्छ - १.0 सेकेन्ड बढी विशिष्ट हुन।
टेस्लाबाट एक साझा पोष्ट (@teslamotors) मा नोभेम्बर १,, २०१ at बिहान :16: ० AM बिहान PST
यस बीच, टेस्ला रोडस्टरको यो दोस्रो जेनरेशन २ + २ वाहन हुनेछ। हो, एलोन कस्तूरी त्यहाँ दुई पछाडि सीट हुनेछ भन्ने तथ्यलाई स was्केत गर्दै थिए, साना व्यक्तिहरूको लागि, तर यो एक-सिटर वाहन हो। यसैबीच, उसले अझ धेरै तथ्या figures्कहरू निरन्तरता दिएः उनले रमाए २ speed० माइल प्रति घण्टाको माथिल्लो गति (400०० किमी प्रति घण्टा भन्दा बढी) र the.8,8 सेकेन्डमा क्वार्टर माईल गर्छ।
अर्को तर्फ, यो दोस्रो जेनेरेसन टेस्ला रोडस्टर द्वारा घोषित दायरा एकल चार्जमा 620२० माईलको दूरीमा यात्रा गरीएको छ। हो, तपाईंले सही सुन्नुभयो: एकल चार्जमा १,००० किलोमिटर स्वायत्तता। के तपाईंको अर्को दैनिक वाहन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार हुनेछ?
यो गर्नको लागि तपाईंले पिग्गी बैंक बनाउनु पर्छ। र त्यो हो आधार मूल्य $ 200.000 हुनेछ (वर्तमान विनिमय दरमा करीव १ 170.000०,००० युरो)। र अबदेखि रिजर्भेसनहरू खुला छन्, जसमा तपाईंले यसलाई make०,००० डलर तिर्नुपर्दछ यसलाई प्रभावकारी बनाउन। दोस्रो पुस्ता टेस्ला रोडस्टर अर्को वर्ष २०२० मा उत्पादनमा जान्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » टेस्ला रोडस्टरको दोस्रो जेनेरेसन, ० सेकेन्ड १० सेकेन्ड भन्दा कममा
स्लीपबडहरू, ती बोस हेडफोन हुन्, हामी उनीहरूसँग शान्तपूर्वक निदाउनेछौं